Shil tareen oo xannibey tareenada isaga goosha daafaha Stockholm iyo magaalooyinka kale - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shil tareen oo xannibey tareenada isaga goosha daafaha Stockholm iyo magaalooyinka kale
La daabacay tisdag 12 november 2013 kl 10.34
Tareen ka mid ah kuwa xamuulka qaada ayaa xannibaad geliyey tareenada dibedda mara oo isaga goosha degmooyinka gobolka Stockholm, kadib markii uu khadkii uu ku socday ka baxay oo qaatay khad qaldan, uuna herdiyey laba tiir oo halkaas ka taagnaa.
Mar la waraystey Peter Matilainen oo ka socda boliiska Stockholm wuxuu wakaaladda wararka ee TT u sheegay in wadihii tareenkaas xamuulka qaada neeftiisa la baaray oo aan laga helin wax aalkolo ah oo jirkiisa ku jirta.
Taasina waxay keentay in hakad waqti dheer socdey ku yimaado tareenada isaga goosha daafaha Stockholm iyo gobolada ku dhow. Tareenadii ka imaanayey dhanka waqooyi waxay la laabanayeen Stockholm Central Station, halka kuwa ka imaanayey dhanka koonfureedna waxay dib uga noqonayeen saldhigga Älvsjö. Saldhigga ama maxaddada Stockholm Södra oo ku dhex taal xaafadda Södermalm ayaa laga xiray tareenada.
Balse Denny Josefsson oo ka socda Hay’adda gaadiidka iyo waddooyinku wuxuu sheegay in ay dhacdo noocaan oo kale ahi ay tahay mid mar dhif ah dhacda in tareen gebi ahaanba la leexdo ama gafo khadkii uu ku socdey isagoo dhulka hoostiisa maraya.